トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Imeyili kusuka pachinko emakhazeni engenamsebenzi ethebuleni ukukhetha
Wena, ebhizinisini e-mail of sasemakhazeni pachinko, noma okuqukethwe efanayo ngaso sonke isikhathi, ngicabanga ukuthi kungaba khona eziningi uthola umyalezo ukuthi banomuzwa wokuthi akusizi kakhulu. Ngo wamakhaza pachinko, ukukhuluma noma ngabe kukhona kungani ukuletha mail, eqinisweni, isizathu esiyinhloko kuba ukuheha abathengi injongo, hhayi ukuze imeyli ukuwina amakhasimende. Nokho, ngisho ecaleni ukuthi wakhululwa, ukuze ukubamba ngenhloso wamakhaza pachinko, e-mail engenamsebenzi Ngithemba uma ulahla ukwazi mkhuba.
ebhizinisini e-mail ye enjalo yaba pa o, kukhona amaphethini ezinye.
eposini ukutshela umoya lokulwa ukuthi axoshwe, welula ngobuqotho namuhla, kuba imeyili ngenjongo kuphela ukuheha amakhasimende ezisebenza inhloso imeyli, the last ngenjongo isaziso lomcimbi. Kulesi, kukhona imeyili lwalutho kakhulu behlakaniphe.
Kuyinto yesibili ukusebenza okuhloswe imeyili amakhasimende okuhloswe ukuheha kuphela. Esikhathini e-mail lokuqukethwe ezinjalo, Ukukhuluma njalo ukutshela lapho ngokuvamile ukufinyelela, 's the emini nantambama. Phakathi imeyili amaningi ukufinyelela e-mail ngosuku, ukuthi kungenzeka ukufunda kakhulu, kuba kwasemini lensimbi. Uma kungekho
ekuseni yokusebenza, ngoba babevame ukuthuma, akashintshi kakhulu ekuseni futhi e-mail kanye nokuqukethwe. Thina amameyili yayihloselwe ngokuphelele ngesikhathi operation kuphela.
futhi kusihlwa e-mail, kodwa uma ibhizinisi evamile cishe nemithelela kanye mail ekuseni. Ukuze uwine intando ukuvakashela kule amakhasimende kusihlwa, kuyoba eposini ukuze yazise ukuvakasha ulwazi umcimbi, nokunye okunjalo kosuku.
ngaphandle umcimbi omkhulu, kulungile ngaphandle ebuka kakhulu. Nokho, kusihlwa e-mail kosuku ubelokhu eqashelwa isehlakalo enkulu, ngoba kukhona icala lapho ulwazi ekhethekile ewusizo ivuliwe, sicela uzame ukuhlola.
isibonelo, izimemezelo, njll simemezelo simo and umehluko isikhathi phakathi platform evulekile izimemezelo ilotho indlela ndima indlela, ungase ube into. Ngaphezu kwalokho, e-mail engenamsebenzi e-mail elandelayo kuphela egijima inhloso, imicimbi Kuyinto imeyli kubhejwa simemezelo.
ngokwanele ukuthi big umcimbi izindlela, kungase wathumela njalo, kodwa akashintshi okuqukethwe kakhulu njalo. Uma ngifunda, into ngokuvamile senziwe okuqukethwe imeyili ephephile ngaphandle kokufunda emva.
ukwaziswa okubalulekile, ngokuvamile kuze kube sebusuku usithumela usuku ngaphambi kwaleso senzakalo, akusizi kakhulu ezifana e-mail ngesikhathi ibhizinisi evamile. Ikhuluma engenamsebenzi izici e-mail anjalo futhi, ekuseni noma cha ukushintsha i-imeyili nokuqukethwe, zama ukubhekisela ngoba kuqhamuka ukuthumela ngayo imeyili ekuseni njengoba kuba futhi.
ngoba futhi afinyelele imeyili imeyili nsuku zonke, uba lilingeka lifuna ukungasalandeli ukulethwa futhi nabona imeyili engenamsebenzi kuphela. Esikhathini mail zilethwe nsuku zonke, futhi uma ifinyelela imeyili noma ebalulekile, Lapho ngifunda indawo kufanele sibonwe okuqukethwe kugcinwe ukusetshenziswa endaweni ethile esebenza kahle ngangokunokwenzeka.